China UV yekudhinda mapaneru YA503 vagadziri uye vanotengesa | Yingjiwei
Yepaneru yekudhinda ye UV UV503
Zvimiro zvealuminium UV yekudhinda pani
2. Dhinda maererano nepateni yako.
3. Nyore kuchenesa uye kuchengetedza.
5. Inoyevedza kutaridzika uye yakasimba
6. Zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvinogona kuve 100% zvekare.
Aluminium UV yekudhinda mapaneru ndeimwe yeakanyanya yepamusoro ekurapa matekinoroji eiyo aruminiyamu pani. Nekuda kwenzira yekudhinda, iko kupinza kwepateni uye kunyatso kujeka nzvimbo yekuvara iri kure neyechinyakare aruminiyamu pani yekurapa tekinoroji. Kunyanya iyo-yechitatu-mativi embossed UV kudhinda tekinoroji, ayo embossing nemazvo uye coloring nemazvo zvakakwirira kupfuura zvetsika maitiro, uye iri imwe yesarudzo dzakanakisisa dzekusimbisa enching maitiro ealuminium panels. Iyo UV yekudhinda aruminiyamu pani ine inotevera ukobvu hwe1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, nezvimwewo Iyo saizi yakakura mushure mekuumba inogona kusvika 1500x5000mm.
Kutenda kune tekinoroji yekudhinda, iyo pateni inogona kuenderana neyako yekukumbira zvaunofarira. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kupurinda pahwaro hwepateni iwe yaunopa. Naizvozvo, inonyanya kukodzera kune ese akakosha anodikanwa ekushongedza munda, uye inokodzera kurapwa kwemadziro emamwe mahotera ekumusoro-soro, nzvimbo dzekutengesa, hofisi hofisi, airport, metro chiteshi, chiteshi chechitima chepamusoro, chipatara, villa, jimunasiyamu, chivakwa chekugara, imba yekuratidzira uye makirabhu.
Chigadzirwa zita Aluminium UV yekudhinda pani
Chinhu It. YA503
Surface kurapwa Kudhinda UV
Ruvara Yakasarudzika pateni
Ukobvu 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Maitiro ekugadzirisa Kugadzira zvinhu, kucheka, kupeta, kukotama, kutenderera, kusimbisa, kukuya, kupenda uye kurongedza.
Zvishandiso Inokodzera zvemukati, hotera, chipatara, chivakwa chekugara, villa, chiteshi, jimunasiyamu, nhandare yendege, chiteshi cheMetro, chiteshi chechitima chakakwira, horo yekuratidzira, nzvimbo yekutengesa uye makirabhu
Pashure: Kuteedzera machena YC102
Zvadaro: Aluminium siringi YD101